Global Voices teny Malagasy » “Mandoro boky sy mandevina mpampianatra ambony”: fandoroamboky miteraka fahatezerana ao amin’ny media sosialy shinoa · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 17 Desambra 2019 7:02 GMT 1	 · Mpanoratra Oiwan Lam Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Azia Atsinanana, Shina, Fahalalahàna miteny, Fanabeazana, Mediam-bahoaka, Politika, Tantara, Zon'olombelona
Efa fenitra ny tolona ara-potokevitra ao Shina ary mahafantatra ny rehetra fa mandalo sivana avokoa ny filma, boky, TV drama, vaovao ary torohay rehetra. Na izany aza, ilay hetsika mandoro boky ankarihary eo anoloan'ny tranomboky dia mampahatsiahy amin'ny vahoaka ny hetsika fahiny tsimifaditrovana “mandoro boky sy mandevina mpampianatra ambony ” nandritra ny fitohizan-taranaka Qin.
Nanomboka tamin'ny Fitohizan-taranaka Qin ny “fandoroana boky sy fandevenana mpampianatra ambony”. [Amin'ny vanim-potoana ankehitriny amin'ny tantaram-pirenena shinoa] nanenjehana manampahaizana an'arivony ny fanentanana anti-kavananista . Ihomehezan'i Mao [ireo mpitarika AKS taloha] ny Amperora Qin amin'ny fandevenana manampahaizana ambony 460, mihoatra ny 46000 no vitan'ny fanentanana anti-kavananista [naotin'ny tonia: mihoatra ny dimy hetsy ny manampahaizana nenjehina nandritra ny fanentanana anti-kavananista]. Ny andiany fahatelo amin'izany dia ny Revolisiona Ara-kolontsaina, tsy voaisa ireo manampahaizana nenjehina. Ankehitriny i Bun Xi [naotin'ny tonia: ny filoha shinoa Xi Jinping] no ao ambadiky ny andiany vaovao amin'ny “fandoroana boky sy fandevenana mpampianatra ambony”. Tsy nobeazina ara-kolontsaina io olona io ary manaraka akaiky an'i Mao Zedong. Mampalahelo ny mahita azy mifehy an'i Shina. Hitondra voina ho an'ny firenena io.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/12/17/145793/
 mandoro boky sy mandevina mpampianatra ambony: https://en.wikipedia.org/wiki/Burning_of_books_and_burying_of_scholars
 fanentanana anti-kavananista: https://mg.globalvoices.org”https://en.wikipedia.org/wiki/Anti-Rightist_Campaign”